I-China Ixabiso eliphakamileyo lokuxhathisa isikwere ibhokisi yento yebhokisi yemisipha yokufudumeza ngesiciko seglasi isitya esitsha esitywiniweyo esikhulu sefektri yebhokisi yemveliso kunye nabaxhasi | Jin Guan Yuan
Ixabiso eliphakamileyo lilonke lebhokisi yento yebhokisi yentsimbi yokufudumeza kunye nesiciko seglasi isitya esitsha esitywiniweyo esikhulu sebhokisi yemini enkulu
I-SETE ENGUNDOQO YOKUGQIBELA-Iseti egqibeleleyo iza neekomityi ezintathu ezinkulu ze-4.4 (35 i-Oz) kunye neziciko ezintathu ezingamacala amathathu-ikomityi (12 Oz), zonke zinamabhanti afanayo. Izikhongozelo zihlala ngaphakathi kwelinye xa zingasetyenziswanga, ezenza ukuba kube lula ukugcina ngokufanelekileyo.
ALUMZANTSI OBUNGCONO-Izikhongozeli ngokwazo azinamahala i-BPA, iglasi enokuphinda yenziwe kwakhona yenziwe kwizinto zendalo. Isiciko ngasinye seplastiki sinebhasikithi yerabha kunye neelenti ezine, ezenza ukuba zingabikho moya ngokupheleleyo kwaye ziboshwe ngokukhuselekileyo ukuze zifumane ukutya okutsha kunye nokukhusela ngokuvuza. Isempilweni kungenye iplasitiki.
VERSATILE-Ibloko nganye yeglasi yenziwa ngeglasi yebhedi engasetyenziswanga, iyenza ikhuseleke kwi-oveni, nakwindawo yokuhlamba izitya, microwave kunye nefreyila ekhuselekileyo. Izitya zeglasi ezinamanzi nazo azichasene nothusayo lobushushu. Bayakwazi ukujongana notshintsho lweqondo lobushushu ngequbuliso olungaphezulu kwama-200 ° F (95 ° C) ngaphandle kophule. Yiya kwindawo eqhaqhazelisa amazimba ukuya ehovini, kwaye uhlale ungqinile-ubungqina. ISIQINISEKISO! Musa ukubeka iiglasi zeplastiki ehovini, microwave, isitya sokuhlambela!
✅ IIMFUNO ZONKE EZIYAFUNA- Ungasebenzisa eli khitshi linamacala amathandathu ugcino, umkhenkce, ukuvuselela umzimba, ukubhaka kunye nokusebenza. Ilungele ukutya okwenziwa ekhaya ngabantwana, kwizinto eziseleyo zokuhlwa, zokuthatha isidlo sasemini kwaye sipakishe ukutya okulula, iitiffins.
IINTSHONA ZI-5 EZIXELWE-IGAMA UNGAQINISA
Iminyaka eli-10 yamava idityaniswe netekhnoloji yakutshanje.
I-ISO 9001: 2000. Yiseti yemigangatho yehlabathi eqinisekisa ukuba iimveliso ziyahlangabezana neemfuno zomthengi, kwaye loo mgangatho uhlala uphucuka.
I-FDA, BPA kunye noVavanyo oluGugileyo lweXabiso loGugi kuqinisekisa ukuba iimveliso zethu ziyahlangabezana nayo yonke imigangatho esemgangathweni kunye nokhuseleko lwezixhobo zethu ezingavuthiyo.
Oku kusinika ukuqiniseka ukuba sizisa iimveliso eziphezulu zetafile kunye nekhitshi.
Namhlanje, izitya zethu zeglasi zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-21 kwaye zithengwa zizigidi zabathengi.
5 IZIQINISEKISO ZOKUJONGA KWIINGXENYE ZOKUXHASA
Kwendalo kwaye ikhuselekile. Izitya zeglasi zenziwe ngeiminerali zendalo - isanti, i-limestone kunye nomlotha wesoda, ukuzenza ziluhlaza ngokupheleleyo kwaye zinempilo.
Ayibalulekanga kwaye ayifezekanga. Izitya zeglasi azinawo ngokupheleleyo amabala- kwaye zinevumba. Umhlaba omenyezelayo unceda ukugcina ukutya kucocekile, kusha kwaye kunencasa ixesha elide.
Imisebenzi emininzi. Izitya zeglasi zinokuhamba ukusuka kwihovini ukuya kwifriji kunye nefrijini kwaye iphinde ihlaziywe kwi-microwave. Zikhuselekile kwisitya sokuhlambela kwaye siyamelana nokukrwecwa. Ifanelekile ngokuthatha izidlo ukuya.
Ihlala ixesha elide. Iglasi ihlala ixesha elide kwaye inokubamba iminyaka yokusetyenziswa kwakhona. Ukuba iwile, iphinde ihlawulwe nge-100%.
Ukungafihlisi. Izitya zeglasi ecacileyo ze-Crystal zikuvumela ngokukhawuleza ukuba uchonge iziqulatho ezishelufini zakho kwaye zilungele umbutho wefriji efanelekileyo.
Edlulileyo: Iziqulathi zokuGcina ukuTya iziQinisekiso ezinamaLiza e-Airtight, Iseti yesi-5 | BPA-Simahla kunye neRain Resistant
Okulandelayo: Ivenkile enkulu yeglasi ekhaya imifuno yeziqhamo isitya dessert isaladi ekhitshini ikhitshi elitsha isaladi isitya kwifriji entsha
Iziqulathi zokuGcina ukuKutya okuKuqukethe ezineMoya ...
Ibhotile ye-cosmetic, Iglasi yeJar Cosmetic, Iseti yeBhotile yeZithambiso, Iiglasi zeCosmetic zeGlasi kwiibhotile zeoyile, Iglasi yezipho zeglasi, Iglasi yeBhotile yeZithambiso,